DFS, Bangiga Adduunka iyo Bahwadaagta Caalamka oo ka wada hadlay Barnaamijka cusub ee Kaararka Aqoonsiga | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta DFS, Bangiga Adduunka iyo Bahwadaagta Caalamka oo ka wada hadlay Barnaamijka cusub...
DFS, Bangiga Adduunka iyo Bahwadaagta Caalamka oo ka wada hadlay Barnaamijka cusub ee Kaararka Aqoonsiga
“Dowladda Soomaaliya waxay si dardar leh ugu howlantahay hirgelinta dhismaha nidaam u qaabeysan fulinta baahiyaha muwaadiniinteeda ee dhanka aqoonsiga”, ayuu yiri Dr. Nuur Diiriye Xirsi. “Si la mid ah taabbogelinta horumarkaas, waxaan u baahannahay inaan hubinno in muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo dadka xaqa u leh la siiyo aqoonsi awood u siin doona helitaanka adeegyada muhiimka ah oo ay ku jiraan adeegyada kaalmooyinka gargaar iyo adeegga xawilaadda. Hirgelinta habkani cusub ee aqoonsi u sameynta muwadiniinta Soomaaliyeed wuxuu ka dhigan yahay wax ka qabashada aragtiyada caalamiga ah ee ka hortaga khataraha iyo fal dambiyeedka”.
Dr. Fuursade wuxuu u sharraxay qaabka farsamo ee bahwadaagta dhanka horumarinta ay gacan uga geysan karaan nidaamkan, isagoo faahfaahiyay hannaanka loo hirgelin karo qorshahani sida kaabayaasha lagama marmaanka u ah sameynta aqoonsiga, sida qorshe sharci iyo nidaam, jadwalka fulinta iyo qiyaasaha miisaaniyadda ku baxaya hirgalinta nidaamkan. Waxa uu carabka ku adkeeyay in Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya uu ku talagalayo hirgalinta hay’ad cusub oo heer federaal ah midaas oo maareeyn doonta nidaamka aqoonsiga.
Dr Nuur ayaa sidoo faahfaahiyay heshiiskii Isfahamka ahaa (MoU) ee dhawaan Dowladda Federaalka Soomaaliya la gashay hay’adda Diiwaangelinta Qaranka (NADRA) ee Pakistan. NADRA waxay soo bandhigtay khibrad ku aadan abuurista iyo hirgelinta barnaamijadda aqoonsiga ee waddamadda jilicsan ama kuwa ka soo baxaya dagaaladda, oo ay ku jiraan meelaha miyiga oo ay adagtahay si ay u gaaraan adeegyadda bulsho ee ay u baahan yihiin.
Dadka intooda badan waxay ku noolyihiin Afrika iyo Aasiya. In ka badan saddex dalool waa carruurta aan diiwaangashaneyn. Maamulka sare ee Bangiga Adduunka ayaa ahmiyad gaar ah oo istaraatijiyadeed saaray Horumarinta Aqoonsiga (ID4D) iyada oo Bangiga Adduunku uu ka tageero dhanka maaliyadda hay’adaha ku howlan sameynta aqoonsiyadda si loo xoojiyo afkaaraha caalamiga ah ee aqoonsi u sameynta muwadiniinta.
“Bangiga adduunka isagoo matalaya caalamka, kaalinta kaga aaddan tageeridda horumarinta aqoonsiga waxay lagama maarmaan u tahay hirgelinta qorshahani aas-aasiga ah dowlad dhisidda Soomaaliya, iyada oo duruufaha gaarka ee Soomaaliya la eegayo taageerada nidaamkan uu caalamku u hayo ayaa lagama marnaam ah in la hirgeliyo si loola jaan qaado adduunka intiisa kale” sidaasi waxaa yiri Dr. Fuursade.